WAREYSI QORAAL AH:- Muxuu ka yiri Faisal Cali waraabe Weerarkii hubeysnaa ee lagu qaaday Wargeyska Hubaal – idalenews.com
Gudoomiyaha Xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyey Somaliland inay ka dambaysay weerar hubaysan oo lagu qaaday Wargeyska Hubaal, kaas oo sheegay inay xisbi Ahaan Cambaaraynayaan falkaasi oo uu ku tilmaamay mid lagu cabudhinayo Madaxbanaanida Warbaahinta.
Mr Waraabe, waxa uu intaasi ku daray in dhacdadaasi ka turjumayso xaalada dalku marayo in inta Afka la soo duubto siddii Al-Shabaab dadka la laayo, sida uu hadalka u dhigay Faysal Cali Waraabe.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID ayaa sidaasi ku sheegay Waraysi uu Khadka Telefoonka ku siiyey Wargeyska Haatuf, waxaanu intaa raaciyey in dadka falkaasi ku kacay aanay ahayn dad iskood ugu kacay oo laga dambeeyo.
Ugu horayna waxa uu hadalkiisa ku bilaabay Faysal Cali Waraabe oo uu yidhi “Arintan dhacday waa arin ka turjumaysa xaalada dalka oo aan hore inoo soo marin, oo qof kastaa meesha uu doono wuxuu doono ka samaynayo, oo aanay jirin hogaan mideeya iyo kala dambayn iyo in hanaankii dawladnimo ay meeshii ka maqan tahay ayay ka markhaati kacaysaa.
Intii aynu Somaliland soo dhisnay ee aynu nabad ku soo celinay ayaa waxa aad moodaa in Istiikad loo haysto, haday midnimadii tahay, haday nabadgalyadii tahay oo imika aan magaaladii la mari karayn habeenkii oo dadka suuqa lagu boobayo, haday tahay Saxaafada xoriyadeedii, haday tahay haykalkii dhisnaa oo imika burburay aad moodo inuu dib u socdo, laakiin arintani waxa ay noqonaysaa arin sii kashifaysa xaalada dalku maanta marayo si cad inoo tusinayo.
Haddii aanu xisbiga UCID nahay aad iyo aad ayaanu u cambaaraynaynaa arintaa, waxaananu rabnaa oo masuuliyadu ay dusha ka saran tahay Ciidamada Booliiska laga bilaabo taliyaha ciidamada, markaa arintaa waanu cambaaraynaynaa waxaananu leenahay waa in dadkii arintaasi geystay la hor keenaa maxkamad degdeg ah.
S: Gudoomiye, ma jirtaa cid falkan ku kici karta ogaantaa, oo aad u tuhmayso in nabadgalyo-daro noocaas ah Ay Warbaahinta Kula Kacdo?
J: Waxa Cad in dadka waxan lagu qabtay aanay iskood dad ugu kacay ahayn, waa arin ay dawladu ka dambayso waliba meel sare, xaga sare weeyaan, waana Arin Cabudhis ah oo loola jeedo in wax kasta markii ay sameeyeen, dawladani wax kasta looga xishooday, dadka qofkii hadlana ay yidhaahdaan afkaanu soo duubanaynaayoo sidii Al-shabaabtii ayaanu laynaynaa, dee waa wax dadku isku sameeyey oo dadkiibaa uu damiirkii ka tagay, dadkiibaa wadaninimadii ka tagtay, markaa waa wax lagu Bajinayo qofqofka qudha ee hadlaya iyo saxaafada qudha ee hadlaysa ee Madaxabanaan.
S: Maxaad ku cadaynaysaa in xubno dawlada Meel sare kaga jiraa ay ka dambeeyeen Falkaasi?
J: Horta ninku Bileyska ayuu ku jiray, dhacdadani dhacdo hore ayay I xasuusinaysaa oo aanaan sheegayn, kama maqna taliyaha Bileysku, nabadgalyadii dalkuna hoosbay u dhacday, maaanta wadooyinka la mari-kari-maayo dhalinyartii qofkii shaadh sita way kala baxayaa, kii dhar fiican sita waa la-daba-galayaa, markaa hadii uu taliyihii Bileysku uu ku tashaday inuu dadka afka u soo duubto maka maqna isagu gacan buu ku leeyahay.
S: Gudoomiye, Mudooyinkii u dambeeyey waxa la moodayey inuu soo fiicnaanayo Xidhiidhka Is-faham ee Saxaafada Madaxabaan iyo Xukuumadu, Maalmihii u dambeeyeyna Xukuumadu ay Warbaahinta kala Hadlaysay In laga midaysnaado Arimaha guud ee Qaranka Oo Siyaasada Khaarajigu ka mid tahay, Maxaa Keenay Weerarkan?
J: Waxa kaliya ee Dawladu ay saaxiib la tahay Saxaafada marka ay iyaga amaanaan, markaa ma ogola hadii ay Dawladu Maryaha dhigato oo la yidhaa Maryihii ayaad dhigateene xidha ma ogola anuu horaan u sheegay oo aan idhi waa dad aan lahayn Masuuliyad oo aan dulqaad lahayn oo aan garanayn inay hayaan xafiis ummadeed oo xaq loogu leeyahay in laga hadlo siday wax u qabanayaan siday umada ugu adeegayaan, waa dad aan waligood hore wax usoo qaban ayay u badan yihiin, oo u haysta shaqada ay dadka u hayaan inay xukumaan oo ah hadii aad imaqli waydo anaa ku xukuma oo waan ku dilayaa weeyaan taladoodu qaar badan ayay ka muqataa.
Laakiin waxa aan u malaynayaa in dadka uu ka dhamaanayo dulqaadkii sida ay ku socoto.
Umana ogolaanayno inay dalka sidaa ugu ciyaaraan, markaa in dadku midoobaan weeyi, in laga hor tago in dalka lagu soo tabcay ee loo soo dhintay ee loosoo gaajooday in maanta koox Illaahay awooda gacanta u galiyey ay dalka ku ciyaarto in laga ilaaliyo weeyaan.
S: Yaa ka ilaalinaya markaa?
J: Shacbiga weeyi, dhalinyarta dalka boqolkiiba 75 waa dhalinyaro mustaqbalkoodii ayaa lagu ciyaarayaa markaa insha alaahu tacaalaa inay gacmaha is qabsadaan weeyaan, waxani wax loo dul qaadan karo maaha, waligeen inay maskaxdeena ku soo dhacdo oo Somaliland ay ka dhici karto maaha oo jariirad wax ka qortay dawlada in afka loo soo duubto Baastoolad loola galo, waa wax aan marna loo dul qaadanayn, lagamana fikirin in taas oo kale ay dhici karto, fawaaxishkii hore ee aanu ka xishoonaynay ayay tana ku darsatay.
Agaasimihii Hay’adda Nabad Suggida oo Magaalada Khartoum iska xaadariyay